KALA DUWANAANTA CANABKA "ARCADIA" - VITICULTURE
Xannaanadani hore waxay u qalantaa mid ka mid ah toban meelood oo sharaf leh liiska noocyada canabka ah ee adduunka. Waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay in ay kobciso kala duwanaanta canabka ah ee Arkadi ee beertaada kuguma samayn doonto wax dhibaato ah, waxaanan ku tilmaami doonaa sida saxda ah.
Qeexida sifooyinka noocyada kala duwan ee canabka "Arcadia"
Noocyada noocan oo kale ah ayaa muddo dheer ka dhistay oo keliya ma aha waddankoodii, Ukraine, laakiin sidoo kale Russia iyo Western Europe. Odessa IVIV iyaga. Tairova waxay si toos ah u tixgelisaa Arcadia inay noqoto sharaf wayn, iyada oo noocyada kala duwan ee laga heley halkan.
Xulashada "Arcadia" waxaa loo isticmaalay laba nooc oo canab ah oo leh sifooyin kala duwan:
Kala duwanaanta canabka "Moldova"taas oo loogu talagalay "deeq-bixiyeyaasha" deeq-bixiyeyaasha "Arcadia" oo ka hor imanaya saameynta xaaladaha dib-u-dhaca ee dibadeed.
"Cardinal" - Kala duwanaan sabiib ah oo leh hannaan tayo sare leh oo ah midhaha kala duwan ee la tilmaamay.
Natiijo ahaan, noocyo canab ah oo aad u fiican ayaa la helay, awood u leh soo saarka dalagyada badan ee waaweyn ee canab waaweyn. Sidoo kale, noocyo kala duwan ayaa loo yaqaan magac kale - "Nastya."
Noocyada kala duwan ee rucubada canabka ah ee kala duwan ee "Arkady"
Kooxaha kala duwan ee noocaan ah waxay awoodaan in ay gaaraan ma ahan qiyaaso waaweyn, laakiin kuwa aad u ballaaran. Miisaankoodu waa kala duwanyahay 0.6 ilaa 2.5 kiiloogaraam. Cabbir ahaan, rucubadu waa isku dhafan yihiin, waxay leeyihiin qaab konik ah ama cylindroconical. Laakiin, inta badan waxaa jira kooxo ay ku jiraan "baal", baaxadda taas oo noqon karta mid aad u weyn. Dhismaha farqiga canabku badanaa wuu furfuran yahay, laakiin waxaa jira kuwa leh cufnaanta celceliska miro.
Ma aha la yaab leh, size ee berry ah ee canabka this sidoo kale waa mid aad u ballaaran. Celcelis ahaan, midhaha caadiga ah ee wadnaha-qaabeeya ama midabka caadiga ah ayaa leh dhererka 3.7 sentimitir, iyo ballaadh ku dhowaad qiyaastii 2.8 sentimitir. Waxay miisaankoodu yahay 10 garaam, inkastoo xaaladaha wanaagsan iyo daryeelka wanaagsan ay gaari karaan qiimaha 15 garaam. Midabka maqaarka ee berry waa cows aad u qurux badan, maqaarka laftiisa, inkastoo aan ahayn qaro, laakiin aad u adkeysan, bixisaa Gaadiidka wanaagsan.
Dusha sare ee maqaarka waxaa lagu daboolaa lakabka khafiifka ah ee qashinka cad (wax). Saxarka ee berry ah waxaa lagu kala saaraa qaabdhismeedka jirka ah iyo juiciness aan caadi ahayn. Dhadhanka nooca berry ah waxaa lagu gartaa dhadhan aan macaan ahayn, taas oo u dhiganta si buuxda leh carafka jilicsan ee jilicsan. Waa in la ogaadaa in qadarka sonkorta ee 100 cm3 of mugga ee berry waa 16-17 grams. Isla mar ahaantaana, asiidhka 1 litir oo miro ah "Arcadia" waa 6-7 garaam oo keliya.
Ujeedada ugu weyn ee canabka "Arcadia" waa miiska koorsada. Rucubyadiisa quruxda badan leh ee berry delicious ah ayaa qurxin doona miis kasta. Sababtoo ah bandhig fiican oo ku habboon gaadiidka, canabkani inta badan si gaar ah loogu koray iibka. Wareeg loo isticmaalo winemaking.
All oo ku saabsan dhalidda ee noocyo canab ah "Arcadia"
Kala duwanaanta noocaas ah waxay jecelyihiin dalagyada marwalba weyn iyo waqti hore. Gaar ahaan, caanaha laga saaro ee canab ah ee canab soo-baxa waxay dhacdaa 125 maalmood ka dib markii gelitaanka xilliga daaqsinka. Isugeynta celceliska mid ka mid ah baadiyaha waa qiyaastii 20 kiilo.
Qaar ka mid ah xardheylayaasha qaarkood waxay ku doodaan in si fiican loo ilaaliyo baadiyaha, hal mar xilli xitaa in ka badan 50 kiilo oo canab qurux badan ayaa laga saari karaa. Guud ahaan, isku dheelitir la'aanta kala duwanaanshahan kala duwanaanta kala duwanaantu waxay u dhaxaysaa 0.9 illaa 1.5, taas oo ah tiro aad u sareysa.
Kuurkan kala duwan ee noocaas ah wuxuu awood u leeyahay xoog korodhka koritaanka, laakiin waxa uu awood u leeyahay inuu sii kordho cabbirka weyn ee ballaaran. Waxaa haboon in la xuso in caleemaha noocyo daaqsinka canab ah "Arcadia" si fiican u qumman, inkasta oo ay mararka qaarkood ay si xun u saameyn karaan cimilada xun. Ka mid ah caleemaha dhan 55-75% waa kuwo miro dhal ah.
Waxay awood u leedahay pollinating on isaga u gaar ah, maadaama uu leeyahay ubax bisexual. Intaa waxaa dheer, iyada oo ay ku caawinayaan canabkani waxaad pollinate noocyo sida "Talisman" iyo "Laura", inkasta oo uu isagu si fiican u awood u leh inuu si gooni ah uga koro noocyo kale.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee canab "Arcadia"
In Ukraine, kala duwan tani waxaa loo tixgeliyaa ugu wanaagsan saddexda goobood oo ugu badan ee ku lug leh beerista canab: ee Lviv, Zaporizhzhya, iyo shaki la'aan ee Crimean ah. Sidaa darteed, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa aagagga ballaaran ee isweydaarsiga noocaan oo kale ah, sababtoo ah haddii la tixgeliyo sida ugu wanaagsan ee Lviv, ka dibna waxay u badan tahay in xitaa waqooyiga Ukraine, iyo sidoo kale dhammaan gobollada dhexe ee Central, waxay sidoo kale awood u leeyihiin inay si miro u dhali.
Sidoo kale waa muhiim in la xuso heerarka sare ee iska-caabbinta canabka "Arcadia" oo u dhaxeysa baraf: Heerkulka kulaylka -22-23ºS waa uu wanaagsan yahay, haddii aad ku daboosho baadiyaha leh filim - ma waxyeelo gaartay -26 ° S. Sidoo kale, faa'iidooyinka kala duwan ee nooca waa sida soo socota:
Xaqiiq ahaan ma saameynayso xagta uumiga - cudur ah oo saameyn kara ma aha oo kaliya canabka ah iyo caleemaha, laakiin midhaha canab ah.
Canab "Arkady" wuxuu awoodaa inuu si deg-deg ah u galo xilliga jajabka: sanadka labaad ka dib markii la tallaalay on stock kaydkii hore, iyo saddexaad marka beeritaanka canab this sapling.
Waxyaabaha ballaaran ee rucubyada quruxda badan iyo dhadhanka leh ee canabku aad ayay u awoodaan in la qaado, taas oo lagu hubiyo maqaar adag.
Cunnayaasha canjeerada "Arcadia" - waxa aad u baahan tahay inaad ogaatid ka hor inta aadan ku beeriin goobtaada
"Arcadia" ma ahan mid ku filan oo awood u leh inay u adkeyso guuldarada cudurada sida oidiyum, iyo sidoo kale caaryada cawl. Sidaas darteed ma ay ku dhufan lahaa geedka canabka ah, waxaa muhiim ah in la qaado daawada ka hortag ah laba jeer hal xilli.
Sidoo kale, canabkani waa mid aad u ha u dulqaadan isbedelka qoyaanka ciidda. Waa arrin aad u muhiim ah in la xakameeyo si qarsoodi ah, haddii kale berry waa la heli karaa mar hore on canab bisil oo caan ah.
Sidoo kale, noocyada kala duwan waxay u baahan yihiin feejignaan gaar ah inta lagu jiro bilawga. Inta badan geedka canabka ah waxaa lagu dhufan karaa, ka dib marka dalagga uu noqdo dal yar. Sidaa darteed, waxay u fiicantahay in ay ka baxaan hal farabadan oo ku saabsan hal biqil ee baadiyaha.
Beerta loo yaqaan "Arcadia" oo ku taal dhulka. Talooyin
Si aad u koraan canab wanaagsan, waxaa muhiim ah ma aha oo kaliya in la doorto noocyo kala duwan oo wanaagsan leh dhalidda wanaagsan. Ka dib oo dhan, khafiifka ah si fudud u baabi'i karo xataa seedling ugu fiican. First of dhan, waxaa aad u muhiim ah in la doorto meesha saxda ah iyo ciidda beeritaanka canab. Ka dib oo dhan, dhirta this beeraha dhali karaa midho wanaagsan oo kaliya xaaladaha helitaanka wanaagsan ee baadiyaha ah qadar ku filan oo qorraxda iyo maqnaanshaha dabaylaha qabow ee waqooyiga.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan beeritaanka canab ee xilliga dayrta iyo gu'ga.
Sidaa awgeed, dhaqankan wuxuu awood u leeyahay inuu koro dhinaca koonfureed ee dhismayaasha. Carrabku waa ka wanaagsan yahay in la soo saaro iftiin iyo bacrin, oo si wanaagsan u diiriya. Waa arrin aad muhiim u ah in ciidda ay si fudud u dhaafi karto biyaha lafteeda, tan iyo qoyaanka xad-dhaafka ah si xun u saameeya beergooyska canabka.
Waqtigee ayuu canabku dhulku ku yaal?
Inta ugu fiican geed canab ah "Arcadia" guga. Sidaa darteed, wuxuu awoodi doonaa inuu si dhakhso ah u bilaabo inuu koro iyo khatarta ah ee lagu keydsho ee seedling canab ama scion waa laga fogaan doonaa. Si kastaba ha noqotee, canabkiisa jiilaalka wuxuu noqonayaa mid waxtar leh. Xaqiiqdii, habkan waxaa suurtogal ah in laga helo canab ka soo geedkii hore ee sabiib ah, ka gooyay, beerid mid cusub, sidaa daraadeed, dardar gelinta horumarinta mid cusub.
Waa noocee beereed si uu u doorto canabka canabkiisa "Arcadia"?
Sida horay loo xusay, kala duwanaanshahan waxaa la faafin karaa labadaba by beerto geedo iyo adoo raacaya. Xaaladda labaad, faa'iido wayn ayaa noqon doonta in qoryaha hore loo abuuray qoryo ay awood u yeeshaan in ay ka dhigaan baadiyaha yar yar inay sii waaraan. Thanks to beeritaanka this baadiyaha sidoo kale kori doonaa si dhakhso ah. Iyada oo dharka ugu fiican, canab khafiif ah waxay si fiican u dhali doontaa miro. Xitaa waxaa lagama maarmaan ah in la dhejiyo xayawaanka la sameeyay.
Si kastaba ha noqotee, dadka khabiirada khibrad leh waxay ogaadaan in ay tahay inta lagu jiro koritaanka on xididada u gaar ah, canab "Arcadia" waa awoodaa in ay soo saaraan wax soo saar badan oo ka dhadhan fiican leh. Sidaa darteed, haddii aadan ku daba joogin badan iyo si degdeg ah oo geedka canabka ah u galay fruiting, oo koraan canabkiina naftaada - waxaa fiican inaad doorato doorashadan.
Tilmaan-bixinno beerto ah oo sabiib ah "Arcadia"
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad iibsato seedling ku habboon noocyada kala duwan. Waxaa muhiim ah in xididdadiisa ay leeyihiin muuqaal cusub oo fiican, aan la waxyeeleyn ama la qalajiyey. Caddeynta nidaamka xidid caafimaad qaba waa midabka cad ee xididada. Waa mid aad u muhiim ah in midabka qaybta iskutallaabta ee seedling waa cagaar. Kaddib, sii gudbi tooska tooska ah:
Waxaan horay u diyaargareynaa godadka. Haddii aad doonayso inaad gasho geedo dhawr ah - meesha u dhaxaysa godadka waa inay ahaataa ugu yaraan 1 mitir. Qoto dheer ee godka waa laba jeer xididdada seedling canab.
Waxaan isla markiiba bacrimiya daloolka: at its hoos u dhacaan lakabka lakabka sare ee ciidda, laga saaro marka qodaya godka, qaso humus. Bacriminta Tani waa in lagu daboolo lakabka ciidda fudud, si aanay u gubin seedling.
Ka hor inta laga beerto, seedling waxay u baahan tahay in la qabto ilaa hal maalin biyo, iyo sidoo kale jaray talooyinka xididdadiisa, iyada oo la isticmaalayo xiirto aad u fiiqan. Koritaanka geedo waxaa lagu dardar-galin karaa xididadeeda xalka si loogu diyaariyo diyaar garow gaar ah oo loo yaqaan "Humat". Xalka aad u baahan tahay inaad isticmaasho ugu badnaan 10 dhibcood oo daroogada ah, oo lagu qasi jiray 1 litir oo biyo ah.
Waa lagama maarmaan in la yareeyo dhirbeelka daloolka illaa 5 sentimitir oo ciid ah ilaa dabaylaha xididka. Waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo qodo, si tartiib ah u buuxinta ceelka dhulka.
Waxaa lagu talinayaa in la qodo taageerada ku dhow seedling canab, taas oo lagu xirayo.
Ka dib markii la beero, seedling waa la waraabiyaa, ciidda ku wareegsan waa mulched.
Iskudhin "Arcadia" oo ku yaal dukaanka qubayska
Si ay u fuliyaan laaluush qaadasho tayo leh, waa mid aad u muhiim ah inaad u diyaarisid jarida lafteeda goor hore. Qaado boog weyn oo aan u qalmin, waxay noqon doontaa 2-3 ku filan. Qaybta hoose waa in laga gooyaa laba dhinac oo leh jajab, sidaas darteed waxaa jira laba "garbaha". Jiridu waxay ku sii jiri doontaa xididada rootstock, haddii aad haysato maalmo badan kahor biyo qaboojinta. Waxay si wax ku ool ah u saameyn doontaa jarida iyo udhigista "Gumat", sida aan ku talineynay inaan ku sameyno seedling kor ku xusan.
Shirkadda ayaa sidoo kale leh shaqo yar. Ka sokow xaqiiqda ah in baadiyaha jir ah u baahan doonaa in si buuxda looga saaro, tegaayo oo kaliya jir daciif ah, cut waa in si taxadar leh loo nadiifiyaa. Dusha sare ee jirku waa inuu ahaado mid si fiican u nadiif ah oo nadiif ah, taas oo lagu xoqo maro qoyan. Dheeraad ah, waa in kaydka waa in si taxaddar leh loo kala qaybiyaa, oo u sameysma foorno. Waxaan bilaabeynaa tallaalka:
Goynta waxaa la dhigayaa meelo kala duwan oo ah meelo la gooyey oo ay ku taabato alwaax, iyo "askarta" waxay ku jiraan booska farqiga.
Waa in si adag loo jiido, iyada oo la isticmaalayo dhar casri ah oo wax burburin kara. Xiddigo badan oo xardheyaal ah ayaa ku duubay shtamb sidoo kale filim si ay u sii hayso qoyaan badan iyo in ay ka ilaaliso qaboojiyaha xilliga jiilaalka.
Sidoo kale, waxaa muhiim ah in lagu qodo taageero meel u dhow jirida, taas oo ah gooyn rujin iyo xidid goynaya.
Wixii jiilaalka, garaamyada leh gooyn meeshoodii meeshoodii waa la daboolay dhoobo, taas oo dammaanad qaadaya ilaalinta qoyaanka ee jirridda.
Wixii xasilin weyn ee jarista waxaa lagula talinayaa in wax laga qabto. Nidaamkan si taxadar leh ayaa loo fuliyaa, maaddaama loo jarayo gogol-galka si macno ahaan labaad loogu beddelo sheybaarka biyaha oo isla markiiba ku qaboojiyey biyo. Waxaa muhiim ah in uunan waxyeelleynin gooynta leh paraffin kulul, laakiin sidoo kale inaadan gubin.
Goosashada wanaagsan ee canabka ah - daryeelka saxda ah
Canab "Arcadia" xaalad kasta ha ku farxi doonto dalagyada badan. Si kastaba ha noqotee, haddii ay sidoo kale si fiican u daryeesho - xayawaanka canab, sida berohooda naftooda, waxay u koraan si aan caadi ahayn.
Waraabinta waa in ay ahaato mid ku habboon xaaladaha cimilada. Waraabinta joogtada ah waxaa badanaa la sameeyaa kaliya ka hor inta ubax iyo ka dib. Sidoo kale, waa lagama-maarmaan tahay in qoyaan lagu soo celiyo ciidda xilliga abaarta si loo helo beergooyska ma dareemeyn isbedel badan oo qoyaanka ciidda ah.
Iyadoo caawimaadda dharka mulching iyo dharka macaan, aad si weyn u saameyn kartaa koritaanka geedka canabka ah iyo caleemaha. Si waxtar leh, hawlahaas ayaa lagu soo bandhigay goosashada. Sidaa darteed, mulching ciidda agagaarka geedka canabka ah 3 sentimitir lakab oo humus ah loona baahan yahay in lagu qabto guga iyo dayrta, iyo Bacriminta Phosphate potassium Waxaa fiican in la sameeyo kaliya guga, si aanay u kicin koritaanka dhirta dayrta.
Geedka geedka canabka ah waa in la sameeyaa si joogto ah inta lagu jiro xilliga uu geedka canabka ah ku jiro xaalad nasasho. Waxa ugu wanaagsan in la sameeyo qaabka taageeraha ee 3-4 xabo oo canab ah. Markaad xirtid shool kasta gaaban 8-12 indhood. Si aad ah ugu tag fasaxyada kala duwan ee beerta "Arcadia" oo ku saabsan 35-45 indhood. Iyadoo ka badan oo iyaga ka mid ah, waxaa suurtagal ah in ay karkariyaan baadiyaha leh dalag. On duurka weyn iyo qaangaarka weyn waa load ugu wanaagsan iyo 55 godad.
Inta lagu jiro muddada ubax, waxaa muhiim ah in la xakameeyo tirada kooxood ee biqil kasta. Si habboon u baxso mid ka mid ah farabadan hal qof oo duulaya. Sidaa darteed, farabadani waxay awoodi doonaan inay sameeyaan hal ballaaran oo ay buuxiyaan miro waaweyn.
Si aad u ilaaliso canab ka soo dhaxan, waa in la daboolaa. Si aad u daboosho canab si fiican, ka dib goynta, baadiyaha si buuxda loo dhigo dhulka iyo daboolo ciidda ama daboolo foorno (marka la daboolayo filim, waxaa muhiim ah in la hubiyo in geedka canabka ah uusan faafin). Geedka caleemaha lagu beeray oo keliya ayaa la daboolay tuubo leh saldhig daboolan oo gebi ahaanba daboolay ciidda.
Canab "Arcadia" ma aha mid u adkaysata cuduro kala duwan, sidaas darteed waa in si joogto ah loo buufiyaa ka hortagga. Tirada jimicsiga xilli kasta waa inay ahaataa ugu yaraan laba. Waxay la qabtaa isla mudadaas markii waraabinta geedka canabka ah. Si loo buufiyo fungicides ayaa loo isticmaalaa. Aad bay u ilaalisaa canabkiisa cudurada Bordeaux dareere ah oo xoog leh oo aan ka badnayn 1%.